Metoprolol vs. atenolol: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी भारी खेल चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी खेलहरु मनोरञ्जन कम्पनी कम्पनी, समाचार समाचार समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Metoprolol vs. atenolol: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
मेट्रोप्रोल र एटेनोलोल हृदय रोग सम्बन्धी शर्तहरूका धेरै प्रकारको उपचारमा एन्जाइना पेक्टोरिस र उच्च रक्तचाप, वा उच्च रक्तचाप सहित प्रयोग गरिन्छ। एन्जाइना पेक्टोरिसले त्यस्तो अवस्थालाई जनाउँछ जहाँ तपाईले छाती दुखाई वा असुविधा अनुभव गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको मुटुले पर्याप्त अक्सिजन युक्त रगत प्राप्त नगरेको कारणले हो। यो उच्च तनाव वा श्रम को अवधिको समयमा हुने बढी सम्भावना हुन सक्छ। उच्च रक्तचाप उच्च रक्तचाप हुनुलाई जनाउँछ जहाँ तपाईंको धमनीहरूको माध्यमबाट बगेको रगत सामान्य दबाव भन्दा उच्चमा छ।
मेट्रोप्रोल र एटेनोलोल एक समान औषधि वर्गमा छन् र समान अवस्थाको उपचार गर्दछन्, तर त्यहाँ यी औषधिहरू बीच केही भिन्नताहरू पनि छन्, र हामी यहाँ ती कुरा गर्ने छौं।
मेट्रोप्रोल र एटेनोल बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
मेट्रोप्रोल एक प्रिस्क्रिप्शन-मात्र औषधि हो जुन कार्डियोसेलेक्टिव बीटा -१-सेलेक्टेड एड्रेनर्जिक एगोनिस्टको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, अन्यथा बीटा ब्लकरहरू भनिन्छ। बीटा १ रिसेप्टर्स हृदय गति बढाउनको लागि जिम्मेवार हुन्छ हृदयको दर बढेको र मुटुको मांसपेशिको बलियो संकुचन हुन्छ। यी रिसेप्टर्सलाई रोक्दै, मेट्रोपोलोलले गरे जस्तै, धीमा मुटुको दर र कम सशक्त संकुचनको परिणाम हुन्छ। मेट्रोप्रोलोल हृदय सम्बन्धी अर्थ हो यसले मुटुमा रहेको बीटा १ रिसेप्टर्सलाई मात्र असर गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ, र यसले शरीरमा अवस्थित अन्य प्रकारका बीटा रिसेप्टर्सलाई कम असर पार्दछ, जस्तै तपाईंको एयरवेजमा।
Metoprolol २ immediate मिलीग्राम, .5 37..5 मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, mg 75 मिलीग्राम, र १०० मिलीग्राम ट्याब्लेटमा तत्काल रिलीज ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ। तत्काल रिलीज मेट्रोप्रोल टार्टरेटको रूपमा सामान्य रूपमा पनि परिचित छ। मेट्रोप्रोलोलको विस्तारित-रिलीज फारम, जसलाई मेटोप्रोलोल सक्सिनेट भनिन्छ, २ mg मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, १०० मिलीग्राम, र २०० मिलीग्रामको बलमा उपलब्ध छ। विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल ट्याब्लेटको रूपमा उही शक्तिहरूमा उपलब्ध छन्। त्यहाँ एक १ मिलीग्राम / एमएल इंजेक्शन समाधानको साथ साथै मौखिक पाउडर पनि छ। मेट्रोपोलोल टार्टरेटको आधा जीवन लगभग तीन घण्टा हो, र मेट्रोपोलल सुक्सिनेटको आधा जीवन लगभग सात घण्टा हुन्छ। यसको मतलब विस्तारित रिलीज फॉर्मूलेसन प्राय: जसो गर्नुपर्दैन।
Atenolol एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पनि हो जुन कार्डियोजेक्टिव बीटा -१-सेलेक्टिभ एड्रेनर्जिक एगोनिस्टको रूपमा वर्गीकृत छ। यो शरीरमा मेट्रोप्रोलोल जस्तै काम गर्दछ। Atenolol को आधा जीवन लगभग छ देखि सात घण्टा हो, र त्यसैले केही metoprolol खुराक भन्दा लामो हुन सक्छ। Atenolol २ mg मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, र १०० मिलीग्राम ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ।
Metoprolol र atenolol बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग कार्डियोसेलेक्टिव बीटा -१-चयनित एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट (बिटा ब्लकर) कार्डियोसेलेक्टिव बीटा -१-चयनित एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट (बिटा ब्लकर)
ब्रान्ड नाम के हो? लोप्रेसर, टोपोल एक्सएल टेनोर्मिन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? तत्काल र विस्तारित-रिलीज मौखिक ट्याब्लेट र क्याप्सूल, इंजेक्शन समाधान, मौखिक पाउडर तत्काल रिलीज मौखिक ट्याब्लेटहरू
मानक खुराक के हो? Mg० मिलीग्राम दिनमा दुई पटक दिनमा mg० मिलीग्राम
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? बच्चाहरू र वयस्कहरू बच्चाहरू र वयस्कहरू
शर्तहरू मेट्रोप्रोल र एटेनोलोल द्वारा उपचार
Metoprolol र atenolol दुबै एनजाइना पेक्टोरिस र उच्च रक्तचापको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। ती दुवै पुरानो, स्थिर एन्जाइना वा अस्थिर एनजाइनामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन, स्थिर एन्जाइना पूर्वानुमान रूपमा देखा पर्दछ जब तपाईं आफैंलाई शारीरिक रूपले बढा दिनुहुन्छ वा पर्याप्त तनावको अधीनमा हुनुहुन्छ। अस्थिर एनजाइना पूर्वानुमान योग्य छैन र आराममा पनि हुन सक्छ।
जब उच्च रक्तचापको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ, मेट्रोप्रोल र एटेनोलोल एक्लै वा अन्य एन्टिहाइपरटेंभिव औषधिको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब यी औषधिहरू एक सक्रिय, संदिग्ध, वा पुष्टि गरिएको मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वा हार्ट अटैकको लागि उपचार योजनामा ​​प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरू बहु-औषधि प्रणालीको हिस्सा हुन्छन् जसमा एन्जियोटेन्सिन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम इनहिबिटरहरू (एसीई अवरोधक) र डायरेटिक्स पनि हुन सक्छ। ईस्केमिक मायोकार्डियल रोगमा, बीटा ब्लकरहरूले मायोकार्डियल मांसपेशीहरूको अक्सिजनको माग कम गर्दछ र एन्टिआर्थराइथम गुणहरू छन्।
Metoprolol र atenolol केहि संकेत को लागी प्रत्येक बन्द-लेबल प्रयोग गरीन्छ। अफ-लेबल प्रयोगले संकेतको लागि प्रयोगलाई जनाउँछ जुन खाना र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदन गरिएको छैन। ती सामान्यतया माइग्रेनहरू रोक्न मद्दतको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यो यी औषधिहरूको लागि सम्भव प्रयोगहरूको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। केवल तपाईंको चिकित्सक वा कार्डियोलोजी विशेषज्ञले निर्णय गर्न सक्दछन् कि यी मध्ये कुनै पनि तपाईंको अवस्थाको लागि उपयुक्त छ।
सर्त मेट्रोप्रोल Atenolol
एनजाइना पेक्टोरिस (क्रोनिक, स्थिर एनजाइना, र अस्थिर एनजाइना सहित) हो हो
उच्च रक्तचाप हो हो
मुटुको असफलता हो हैन
मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो हो
एट्रियल फाइब्रिलेसन वा एट्रियल बडबडमा मुटुको दर नियन्त्रण अफ-लेबल अफ-लेबल
कम्पन अफ-लेबल अफ-लेबल
माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस अफ-लेबल अफ-लेबल
प्यारोक्सिमल सुप्रावेन्ट्रिकुलर टाचिकार्डिया प्रोफिलैक्सिस हैन अफ-लेबल
रक्सी फिर्ता हैन अफ-लेबल
के मेट्रोप्रोल वा एटेनोलोल बढी प्रभावकारी छ?
Metoprolol र atenolol को अध्ययन गरीएको छ र बिभिन्न संकेत र परिणामहरूको लागि विस्तृत रूपमा तुलना गरिएको छ। A मेटा-विश्लेषण २०१ 2017 मा प्रकाशितले यी दुई बीटा ब्लकरहरूको तुलनात्मक प्रभावकारिताका साथै प्रोफेनरोल र ओक्सप्रेनोलोलको बहु क्लिनिकल परीक्षणहरूको नतीजामा मूल्या evalu्कन गरेको थियो। मेट्रोपोललले एटेनोलोलको तुलनामा मुटुको मृत्युको जोखिममा बढी महत्त्वपूर्ण ह्रास देखायो। मेट्रोप्रोलले पनि सबै कारण मृत्युदर र कोरोनरी हृदय रोगको लागि कम प्रवृत्ति देखायो। स्ट्रोकको जोखिममा कमीको लागि मूल्या When्कन गर्दा, मेट्रोपोलोल एटेनोलोलसँग पनि राम्रो हुन्छ। त्यहाँ छ डाटा यसले सुझाव दिन्छ कि दुबै औषधिहरू प्लासबो विरूद्ध प्रभावी छ र रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) लाई नियन्त्रण गर्न सक्ने तिनीहरूको क्षमताको हिसाबले एटेनोलोल र मेटोप्रोलोल बीच महत्त्वपूर्ण भिन्नता छैन।
मेट्रोप्रोल दुबै सिस्टोलिक र डायस्टोलिक रक्तचाप कम देखाइएको छ। Atenolol सिस्टोलिक रक्तचापले डायस्टोलिक भन्दा बढीलाई असर गर्न सक्छ, विशेष गरी परिश्रमको समयमा।
यस जानकारीको आधारमा, तपाईंको डाक्टरले तपाईंको लागि एजेन्ट छनौट गर्दा पहिले मेट्रोपोलोलबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। केवल तपाईंको चिकित्सकले निर्धारण गर्न सक्दछ कि बीटा अवरोधक उपचार तपाईं को लागी उपयुक्त छ।
कभरेज र मेट्रोप्रोलोल बनाम अटेनोलोलको लागत तुलना
मेट्रोप्रोल एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो जुन दुबै व्यवसायिक र मेडिकेयर बीमा योजनाहरूले कभर गरेको छ। यदि तपाईं एक मेट्रोप्रोल प्रिस्क्रिप्शनको लागि नगद भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एक महिनाको आपूर्तिको लागि $ 31 तिर्न सक्नुहुनेछ। सिंगलकेयरले कूपन प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई मेट्रोपोलोलको लागि $ around को भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ।
Atenolol एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो जुन दुबै वाणिज्यिक र मेडिकेयर बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। बीमा बिना, तपाईं mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटको -०-दिन आपूर्तिको लागि around $० तिर्न सक्नुहुनेछ। एकलकेयरबाट बचत कार्डको साथ, तपाईं यो प्रिस्क्रिप्शनको लागि लगभग $ pay तिर्न सक्नुहुनेछ।
मात्रा ,०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ,०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $। $ ०- $ १०
एकलकेयर लागत $ - $ २२ $ 9- $ 25
Metoprolol vs. atenolol का सामान्य साइड इफेक्टहरू
कार्डियोसेलेक्टिव बेटा ब्लकरहरू जस्तै मेटोप्रोलोल र एटेनोलोलले मुटुको धडकन दरको साथ साथ बलले धड्किन्छ। मुटुको दरको सुस्तताले ब्रेडीकार्डिया, वा कम मुटुको दर निम्त्याउन सक्छ। जब मुटुले जबरजस्ती धडकन सक्दिन, कहिलेकाँही रगत प्रवाह हामीले चाहेको दवावबाट हदसम्म पुग्न सक्दैन, चिसोपनलाई चिसो हुन सक्ने चरम सीमामा पुर्‍याउँछ।
कम बलपूर्ण रगत प्रवाह र कम धमनीको चाप पनि पछाडि हाइपोटेशन, बस्दा वा सुत्न पछि उभिए पछि हल्का टाउको र चक्कर आउँछ जस्तै साइड इफेक्ट हुन सक्छ। टाउको दुख्ने रोगीहरु लाई metoprolol र atenolol लिन सक्छ।
यो साइड इफेक्टको पूर्ण सूची हुने उद्देश्यले होइन। पूर्ण सूचीका लागि कृपया तपाईको फार्मासिष्ट वा डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्।
थकान हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो ०..6%
चक्कर हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो %%
डिप्रेसन हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो ०..6%
टाउको दुखाई हो रिपोर्ट गरिएको छैन हैन n / a
सासको कमी हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो ०..6%
ब्राडीकार्डिया हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो %%
चिसो उग्रता हो रिपोर्ट गरिएको छैन हैन n / a
Hypotression हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो दुई%
घरघराहट हो रिपोर्ट गरिएको छैन हैन n / a
पखाला हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो दुई%
मतली हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो %%
पुराना हो रिपोर्ट गरिएको छैन हैन n / a
स्रोत: Metoprolol ( डेलीमेड ) Atenolol ( डेलीमेड )
मेट्रोपोलोल बनाम एटेनोलोलको ड्रग अन्तर्क्रिया
डिगोक्सिन र बीटा ब्लकरहरू जस्तै मेट्रोप्रोल र एटेनोल प्रत्येकले संकुचन र मुटुको दरको जबरजस्तीलाई असर गर्दछ। जब सँगै दिइन्छ, बिरामीहरू ब्राडीकार्डिया र हाइपोटेशनको बढेको जोखिममा हुन्छन्। मुटुको दर, रक्तचाप, र कार्डियक डिसफंक्शनका अन्य लक्षणहरू नियमित रूपमा अनुगमित गरिनु पर्छ यदि तिनीहरू सँगै दिनु पर्छ।
मेट्रोप्रोल र एटेनोलोल क्याल्शियम च्यानल ब्लकरहरूसँग मिल्दछ जस्तै एम्लोडेपिनले कार्डियक संकुचनमा एक अतिरिक्त कटौती गर्न सक्छ जुन खतरनाक हुन सक्छ। यदि संयोजन आवश्यक छ भने, यो बेसलाइन समारोह मापन प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ र लगातार अनुगमन गर्नुहोस्।
कति घन्टा योजना लिने b
फ्लोभोक्सामिन, क्लोमिप्रमाइन, र सेलेक्टिभ सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटरहरू (एसएसआरआई) जस्ता सामान्य एन्टीडिप्रेससन्टहरूले एन्जाइम (CYP2D6) लाई रोक्दछ जुन मेटापोरोलको मेटाबोलिज्मको लागि जिम्मेवार हुन्छ। जब metoprolol को साथ सँगै दिइन्छ, यी औषधीहरूले metoprolol रगत को स्तर को वृद्धि गर्न सक्छ। यसले कार्डियक प्रणालीमा मेट्रोपोलोलको प्रभाव बढाउन सक्छ।
यो सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको सम्पूर्ण समावेशी सूचि हुनको लागि हैन। पूर्ण सूचीका लागि तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य सेवाको सल्लाह लिनु पर्छ।
औषधि औषधि वर्ग मेट्रोप्रोल Atenolol
मेथिल्डोपा अल्फा एड्रेनर्जिक विरोधीहरू हो हो
Isocarboxazid मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs) हो हो
डिजोक्सिन डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स / एन्टिआर्थराइथम हो हो
Verapamil क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरू हो हो
Desipramine Antidepressants हो हैन
सर्टलाइन चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (एसएसआरआई) हो हैन
हाइड्रालाजाइन वासोडिलेटर हो हो
Dipyridamole प्लेटलेट अवरोधक हो हो
डायहाइड्रोर्गोटामाइन अर्गोट एल्कालोइड्स हो हो
Metoprolol र atenolol को चेतावनी
बीटा ब्लकरहरू हृदय संकुचन को उदासीनताको कारण। केहि जोखिम कारकहरू भएका बिरामीहरूमा, यसले मुटुको विफलतालाई निम्त्याउन सक्छ। यदि यो हुन्छ भने, हृदय विफलता वर्तमान दिशानिर्देशहरू अनुसार उपचार गरिनु पर्छ।
बिटा ब्लकरहरूलाई अचानक रोक्न हुँदैन, विशेष गरी कोरोनरी धमनी रोगका बिरामीहरूमा। हार्ट अट्याक र भेंट्रिकुलर एरिथमियास बिरामीहरुमा रिपोर्ट गरिएको छ जसले अचानक बेटा ब्लकरहरूलाई बन्द गर्दछ।
सम्भव भएमा, दमा जस्ता ब्रोंकास्प्यास्टिक रोगहरू भएका बिरामीहरूमा बीटा ब्लक गर्ने एजेन्टहरूलाई त्याग्नु पर्छ। संगत प्रयोगले ब्रोन्कियल रोगलाई बढावा दिन सक्छ। यदि बीटा ब्लकरहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ भने, कार्डियोजेक्टिवहरू प्राथमिकता दिइन्छ। गैर-कार्डियोजेक्टिव बिटा ब्लकरहरूको प्रयोगको सिफारिश गरिदैन।
रेन्टल रोग वा गुर्दा कमजोरी भएका बिरामीहरूमा औषधीको विसर्जन ढिलो हुने भएकोले एन्टिनोल डोजि reduced घटाउनु पर्छ।
एक अनियमित नियंत्रित प्रयोगसाला परिक्षण ल्यान्सेटद्वारा प्रकाशित सुझाव दिईन्छ कि बिरा ब्लकरहरू (विशेष गरी मेट्रोपोलल) हुँदा शल्यक्रिया गर्ने बिरामीहरूलाई हार्ट अटैक वा स्ट्रोक जस्ता गम्भीर नतिजाको बढ्दो जोखिम हुन्छ। यद्यपि शल्यक्रियाका लागि बिटा-ब्लकर रोक्न सल्लाह दिइदैन यदि कुनै बिरामी यसमा स्थिर छ भने।
मधुमेह बिरामीहरू टाकीकार्डिया जस्ता हाइपोग्लाइसीमियाका लक्षणहरू देख्न गाह्रो हुन सक्छ भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ, किनकि तिनीहरू बीटा अवरोधकको प्रभावबाट मुखौटा हुनेछन्।
मेटोप्रोलोल र एटेनोलोलले ल्याएको चक्कर र हाइपिटोननले झरनाको जोखिम र घटना बढाउन सक्छ जुन खतरनाक हुन सक्छ वा टाउकोमा चोट लाग्न सक्छ। सावधानी वयस्क वयस्कहरूमा लिनुपर्दछ जो पहिले नै झरनाको जोखिममा छन्।
केवल तपाइँको डाक्टरले यो निर्णय गर्न सक्दछ कि मेट्रोप्रोलोल वा atenolol थेरापी तपाइँ को लागी सुरक्षित छ।
Metoprolol बनाम atenolol को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
मेटोप्रोलोल भनेको के हो?
मेट्रोप्रोल एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो जुन एक हृदय बीटा ब्लकरको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यसले मुटुको दर र हृदयको संकुचनको बलपूर्वक कम गर्दै उच्च रक्तचाप र एनजाइनाको उपचार गर्न काम गर्दछ। यो तत्काल रिलीज मौखिक ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेट र क्याप्सुल, इंजेक्शन समाधान, र मौखिक पाउडरमा उपलब्ध छ।
Atenolol के हो?
Atenolol एक कार्डियोजेक्टिव बीटा ब्लकर हो जुन प्रिस्क्रिप्सन द्वारा मात्र उपलब्ध हुन्छ। यसले मुटुको दर र हृदयको संकुचनको बलपूर्वक कम गर्दै उच्च रक्तचाप र एनजाइनाको उपचार गर्न काम गर्दछ। यो तत्काल रिलीज मौखिक ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ।
के मेट्रोप्रोल र एटेनोल एकै हुन्?
Metoprolol र atenolol प्रत्येक हृदय बीटा ब्लकरहरू हुन्, र उनीहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने औषधि विज्ञान समान छ, तर ती वास्तवमा उस्तै छैनन्। मेट्रोप्रोल दुई प्रकारका उपलब्ध छन्, एउटा छोटो-अभिनय र एक लामो-अभिनय, र यो सूत्रको आधारमा दैनिक एक वा दुई पटक गर्न सकिन्छ। Metoprolol लाईपोफिलिक पनि हो, यसको मतलब यो अधिक फैटी (लिपिड) वातावरणमा विघटन हुन्छ। यस कारणका लागि, खानाको साथ मेट्रोप्रोल लिने सिफारिश गरिन्छ। Atenolol दैनिक एक पटक dosed र हाइड्रोफिलिक हो। Atenolol अधिक जलीय वातावरणमा घुल्छ, र त्यसैले मात्र एक गिलास पानी संग लिन आवश्यक छ।
के मेट्रोप्रोल वा एटेनोल राम्रो छ?
डाटाले सुझाव दिन्छ कि यी दुई औषधिहरूको उच्च रक्तचाप बिरामीहरूमा समान परिणामहरू छन्, तथापि, दीर्घकालीन हृदय रोगहरूको नतिजाहरू, जस्तै कम बिरामीपन, मेटाप्रोलसँग बढी अनुकूल हुन सक्छ।
अवधि विनियमित गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो जन्म नियन्त्रण गोली
के म गर्भवती हुँदा मेट्रोप्रोल वा एटेनोल प्रयोग गर्न सक्छु?
Metoprolol गर्भावस्था कोटि सी मा छ। गर्भावस्था मा सुरक्षा स्थापित गर्न को लागी कुनै नियन्त्रण को अध्ययन छैन। गर्भवती वा स्तनपान गर्दा Metoprolol लिन सम्बन्धी चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। Atenolol गर्भावस्था कोटि D मा छ। यो contraindated छ र गर्भावस्था मा लिनु हुँदैन। गर्भावस्था वा स्तनपानको योजना बनाउँदा कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्छ भन्ने बारे डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
म रक्सीको साथ Atenolol को लागी metoprolol प्रयोग गर्न सक्छु?
जबकि रक्सी र बीटा ब्लकरहरू जस्तै मेट्रोप्रोल र एटेनोलोल बीच कुनै सीधा रासायनिक अन्तर्क्रिया हुँदैन, रक्सीको सेवनले तपाईंको रक्तचाप खस्काउछ। ड्रग्स र रक्सीको संयुक्त प्रभावले तपाईंलाई बेहोश हुनु वा खसेको र आफैलाई चोट पुर्‍याउने जोखिममा पार्न सक्छ।
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्सका साथ यात्राका लागि tips सल्लाहहरू
cefdinir 300 मिलीग्राम को लागी प्रयोग गरीन्छ
कति समय लाग्छ sertraline को लागी काम शुरू गर्न को लागी
के म सिंथ्रोइड संग भिटामिन डी लिन सक्छु?
स्याउ साइडर सिरका रक्तचाप मा मद्दत गर्दछ?
अमेरिका मा कति प्रकार 1 मधुमेह रोगीहरु